यसको विश्वसनीयता को एक ग्यारेन्टी रूपमा बैंक को मुद्रा स्थिति
पहिलो स्थानमा बैंक को परिणाम सही विनिमय दर मा "प्ले" संग सम्बन्धित छ। र पछि यो एक खेल हो, त्यहाँ सधैं कसैलाई हरुवा छ। तर, बैंक को मामला मा पनि छैन मात्र आफूलाई, तर यसको ग्राहकहरु पीडित। तसर्थ, निवेशक, अरू कसैलाई जस्तै, बैंक को के मुद्रा स्थिति रुचि, यो यो विनिमय दर परिवर्तनको सम्बन्धित सम्भव घाटा निर्भर हुनेछ हो किनभने हुनुपर्छ। र यो आफ्नो भाग्य को सबै प्रभावित!
त्यसैले विदेशी मुद्रा स्थिति के छ, र यो बैंकको गतिविधिहरु को दक्षता कसरी असर गर्छ?
सबै को पहिलो, यो एक अलग मा गणना दावी र दायित्व को अनुपात छ मुद्रा कारोबार यसलाई उत्पादन जो संग। यस मामला मा, यो खोलियो र बन्द गर्न सकिन्छ। मुद्रा स्थिति खुला अर्थ यो विशेष मुद्रा सम्पत्ति र दायित्व को राशि मेल खाँदैन भनेर, अर्थात्, यसको विनिमय दर मा परिवर्तन को मामला मा, बैंक लाभ वा हानि खडा हुनेछन्। लामो र छोटो खुला मुद्रा स्थिति भेद। यदि मुद्रा स्थिति - लामो, बैंक को प्राप्य खाता खाता, अर्थात् नाघ्यो यो खस्दा - उहाँले विदेशी मुद्रा को विनिमय दर मा वृद्धि र हरुवा देखि लाभ हुनेछ। यसको लेनदारों गर्न बैंकको दायित्व यसको ऋणीहरूलाई को आवश्यकताहरु नाघ्यो, त्यसैले यसलाई वृद्धि गर्न गर्न लाभप्रद र मूल्यह्रास छ: छोटो स्थिति बारी मा, सही विपरीत समावेश छ।
धेरै, को पाठ्यक्रम, अब यसलाई विदेशी मुद्रा स्थिति राम्रो बन्द भएको थियो लाग्यो: र तथापि, कुनै पनि जोखिम चिन्ता छैन, त्यसपछि कसरी चाहेको उच्च लाभ प्राप्त? निस्सन्देह, यो जो लागि विनिमय दर मा एक सिपालु खेल छ र स्थिर छैन, speculative लाभ छ। राज्य यसको सम्पत्ति मात्रा निर्भर बैंक को खुला स्थिति अधिकतम आकार regulates किनभने तर, चिन्ता गर्न हतार छैन। साथै, बैंक सही परिभाषा रुचि छ मुद्रा जोखिम, र यसैले, र बजार अवस्थामा परिवर्तन निगरानी।
वास्तवमा, पनि बैंक लागि खराब मामला परिदृश्य तपाईं आफ्नो ग्राहक र निवेशक रूपमा पनि यो मामला मा, आफ्नो जम्मा बैंक वा अधिकृत को आरक्षित निधि को खर्च मा तपाईं भुक्तान हुनेछ किनभने असर पार्ने छैन। यसबाहेक, बैंक लगातार उहाँले काम गर्दछ कोसँग विनिमय दर गतिशीलता, को पूर्वानुमान निगरानी। पनि मा पहिलो एक अनुवाद दायित्व र सम्पत्ति को माध्यम द्वारा बन्द स्थिति मा खुला स्थितिको निरन्तर पुन: गणनामा लगे खुलेर परिवर्तनीय मुद्रा, राष्ट्रिय मुद्रा र त्यसपछि। 2012 मा, रूस को केन्द्रीय बैंक 20% - खुला विदेशी मुद्रा स्थिति 10% भन्दा पनि बैंकको राजधानी को आकार, र खुला स्थितिहरू को मात्रा भन्दा बढी हुन सक्दैन भनेर स्थापित गरेको छ।
यी तथ्याङ्कले देखि देख्न सकिन्छ रूपमा, मुद्रा जोखिम कस reguliruktsya राज्य हो, र जहाँ अवस्थामा सम्पत्ति र दायित्व मुद्रा द्वारा छैनन् आपसमा बराबर, विशेष ध्यान विषय हो, त्यसैले बैंकहरू 'ग्राहकहरु पक्कै कुनै चिन्ता लागि कारण। तर, आफ्नो अवकाश मा निश्चित चोट सक्दैन लागि बैंकिंग, विदेशी विनिमय जोखिम र बैंकको मुद्रा स्थितिहरू तपाईं को प्रकार पढ्न!
रूसी संघ को केन्द्रीय बैंक को उद्देश्य र आफ्नो कार्यान्वयनको तरिका
धातु खाता Sberbank के छ। depersonalized धातु खाता Sberbank कसरी खोल्न
विश्व मुद्रा: आफ्नो प्रकृति र समारोह
बचत बैंकमा सबैभन्दा लाभदायक योगदान के छ? बचत बैंक के योगदान थप लाभदायक छ?
Sberbank भर्चुअल कार्ड: अवकास
ग्याँस Hob - समीक्षा। को Hob ग्याँस3बर्नर छ। ग्याँस Hob "Bosh"
Cheesecake "न्यूयोर्क" - स्वादिष्ट र मीठा पकवान निविदा
हामीले सडकमा एक प्लेलिस्ट कारमा के सुन्नौं
किर्गिस्तान गरेको हिमालहरू: विवरण, इतिहास र रोचक तथ्य
तर्कको दर्ता: विचार, डिजाइन, सामग्री
किन चिबुक crunches र यो खतरनाक छ?
सिस्टम आवश्यकताहरु मेट्रो Redux - विवरण र तुलना
Heterochromia - यो के हो? मानिसहरूलाई मा Heterochromia
जो यदि CTP बाँकी दण्ड निर्भर?
बियर जाँड - आधुनिक बियर को प्रोटोटाइप
Warcraft3को लागि Cheats: जमे सिंहासनको
सोफे को परिवर्तन को तंत्र। सार